के हामी खाना खान जान्दछौं?... :: रामदेवी महर्जन :: Setopati
रामदेवी महर्जन काठमाडाैं, जेठ २०
अहिले हाम्रो भान्छामा धेरै किसिमका परिकार पाक्छ। पोषणका लागि थरिथरिका खाना मिसाएर खाने चलन छ। यसरी मिसाइएको खानाले शरीरमा कस्तो असर गर्छ, पाचन ठीक तरिकाले हुन्छ-हुँदैन, शरीरलाई ठीक छ-छैन भन्नेमा हामीले ध्यान दिएका छैनौं।
खानु मात्र ठूलो कुरा होइन। खाएपछि २४ घन्टामा पाचन भएर शरीरलाई चाहिने रस सोसेर बाँकी भएको ठोस अंश बाहिर निष्कासन भई पेट सफा हुनुपर्छ। स्वास्थ्यका लागि सही खानपान, सही पाचन र पेटको सफाइ अनिवार्य छ। पाचन राम्रोसँग हुन र पेट सफा हुन खानामा प्रशस्त रेशा, छोक्रा-बोक्रा हुनुपर्छ। प्रशोधन नगरिएका खाद्य पदार्थ, नफलेको चामल, गहुँ, आँटा, मकै आदिमा रेशा हुन्छ भने सबै खाले हरिया तरकारी र ताजा फलमा पाइन्छ।
टायलिनसँग पाचन भएको कार्बोहाइड्रेट पेटमा पुग्छ। पेटमा कार्बोजको पाचन हुँदैन। पेटमा खाना पुगेपछि पेट चल्न थाल्छ र पेटको ग्यास्ट्रिक जुसमा खाना मुछिएर लेदो बन्छ। त्यसपछि स्टार्च पेटबाट ग्रहणी (सानो आन्द्राको पहिलो भाग) मा पुगेर पाचन हुन्छ। त्यहाँ रहेको एमाइलेज पाचक रसले स्टार्चलाई बाइसेकेराइड्समा बदल्छ भने आन्द्राको मध्य भागमा पुगेर माल्टेज, सुक्रोज र लैक्टेज पाचक रसको सहयोगले गुल्कोजमा परिवर्तन हुन्छ।
चिल्लोको पाचन– यसको पाचन सिधा सानो आन्द्रामा गएर मात्र हुन्छ। सानो आन्द्रामा पित्त र अग्न्याशायिक रस हुन्छ। सानो आन्द्रामा रहेको पित्तले चिल्लोलाई सानो-सानो टुक्रा बनाउँछ र यसलाई आन्द्रामा रहेको अर्को रस लाइपेजले फ्याटी एसिडमा परिवर्तन गर्छ।
मेलः सबै अमिलो वर्गका खाना, फल र हरिया सब्जीसँग प्रोटिन लिन सकिन्छ। जस्तैः दाल गेडागुडीसँग कागती, माछा-मासुसँग हरिया तरकारी र अमिलो फलफूल राम्रो मेल हुन्छ।
भातसँग दाल, माछा मासु खानु हुँदैन भन्दा सबैमा किन भन्ने जिज्ञासा हुन सक्छ। हाम्रा पुर्खादेखि खाँदै आएको हो, अहिले किन खानु हुँदैन त?
अहिले हामी भातसँग दाल, माछा, मासु टन्न खाने, अझ सन्तुलित भोजनका नाममा १० थरी मिलाएर खान्छौं तर शारिरीक परिश्रम गर्दैनौं। स्वस्थ रहन निद्रा अति आवश्यक हो। तर हाम्रो सुत्ने-उठ्ने समयको ठेगान छैन। त्यसैले हामीले मौसम अनुकूल खाना मिलाएर खाने, अनिवार्य परिश्रम गर्ने, ठीक समयमा सुत्ने-उठ्ने पनि गर्नुपर्छ।
खाने नियमः शरीरको नियमअनुसार भोक लागेपछि खानु उपयुक्त हुन्छ। तर भोक लाग्यो भन्दैमा पटकपटक खाइरहनु हुँदैन। सामान्यतया दिनमा ३ पटक खाने- बिहान र बेलुकी खाना र दिउँसो खाजा। खाजामा ताजा तरकारीको सुप या फलफूल जस्ता हल्का आहार उपयुक्त हुन्छ।
बिहानको खाना– ९ देखि १० बजेभित्र। भात या रोटीसँग हरिया तरकारी दुई कचौरा (लगभग ३०० ग्राम)। अन्त्यमा सलाद-फल १५० देखि २०० ग्राम।
बेलुकीको खाना– ८ बजेभित्र। बिहानको जस्तै खाना। बेलुकी खाएको कम्तिमा १-२ घन्टापछि मात्र सुत्ने।
नास्ता– अचेल नास्ता खाने चलन छ। खाना ढिला भएमा (बिहानको ११ पछि) नास्ता लिन सकिन्छ। अन्य अवस्थामा नास्ता खानै पर्ने होइन।
एक खाना र अर्को खानाको समय अन्तर ४-५ घन्टा हुनुपर्छ। पेटमा खाना पाचन हुन ४ घन्टा लाग्छ। त्यसैले भारी खाना खाएको ४-५ घन्टापछि मात्र अर्को खाने। फलफूल जस्ता हलुका आहार २-३ घन्टामा र पानी पिएको आधादेखि एक घन्टापछि खान सकिन्छ।
अन्त्यमा, खाना कसरी र कुनसँग के खाने भन्नेमा कुनै मत-मान्यता बनाई राख्न जरुरी भने छैन। शरीरलाई मापदण्ड बनाएर खाँदा राम्रो हुन्छ। जुन खाना खाँदा राम्रोसँग पचेर शरीर हलुका हुन्छ, त्यो मिश्रण उचित हुन्छ। खाएपछि शरीर भारी हुनु अनुचित हो।
–कार्बोहाइड्रेट प्रधान खाना- भात, रोटीसँग अमिला खाद्यपदार्थ जस्तै कागती, अमिलो फल नलिने। प्रोटिनप्रधान- खाना माछा, मासु, दाल आदिसँग कागती र अमिला फल खान सकिन्छ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ २०, २०७७, १५:२३:००